Ciidamada Booliska Burco oo Joojiyay Bandhig Buug Jacayl Ah iyo Qoraaga Buuga oo Ka Hadley | WAJAALE NEWS
Ciidamada Booliska Burco oo Joojiyay Bandhig Buug Jacayl Ah iyo Qoraaga Buuga oo Ka Hadley
February 11, 2019 - Written by Reporter:
Burco (WJN)- Magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaa lagu joojiyay bandhig buug Jacayl ah oo ay ka soo qayb galeen dhallin yaro badan.
Buugan “Hadyad Jacayl wuxuu ku saabsan yahay jacayl iyadoo ay dadku ka dheehan karaan dhammaan culuunta ku saabsan Jacaylka,” ayuu yidhi Cabdisamad Aw Daahir oo qoray buuga ah.
Haddii uu jacayl kali ah ka hadlayo buuggaasi maxaa sababay in booliiska magaalada Burco ay ka hor istaagaan ayaa la waydiiyay Cabdisamad.
“Waxaan fasax ka qaadanay maamulka iyo guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista, iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana xafladdii oo socota nalaga joojiyay mana aanan filay in ay Burco arrintaas ka dhacdo.” ayuu yidhi Cabdi Samad.
“Wadaadada xumaan reebista oo meesha joogay ayaa noosheegay in meesha ay dhaqan xumo ka jirto, ama ha is qabaan ama yayna is qabine in ruux dumar ah iyo nin rag ah in tay meesha soo istaagaan ay garbaha iyo dhexda is qabsanayaan ee bal arrintaas wax ka qabta,” ayuu yidhi Taliyaha booliska ee magaalada Burco Axmed Aw Cali Shabeel ayaa wax laga weydiiyay sababta xafladda loo joojiyay.
Guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ayaaa ka gaabsaday in ay arrintan ka hadlaan.